५०० लिएर मुम्बई गएका अम्बानी कसरी धनाड्य? - Everest Dainik - News from Nepal
५०० लिएर मुम्बई गएका अम्बानी कसरी धनाड्य?
एजेन्सी । ६२ वर्षीय मुकेश अम्बानी एसियाकै धनी हुन् । उनी उनको आलिसान घर, गाडी, रिलायन्स कम्पनी जस्ता विभिन्न सम्पतीका मालिक हुन् । उनको जीवनशैलीलाई अनुकरण गर्ने चाहाना धेरैको हुन्छ ।
पढ्ने रहर हुँदाहुँदै पनि बीचमै पढाई छोड्न बाध्य भएका अम्बानीले केमिकल इन्जिनियरिङमा डिग्री हासिल गरेपछि एमबीए गर्न चाहान्थे । तर व्यवसाय अगाडि बढाउनको लागि उनको पिताले उनको पढाई बीचमै रोकिदिए । त्यसपछि उनले सन् १९८१ मा उनले पितासँग मिलेर रिलायन्स पेट्रोलियम रसायनको शुरुवात गरे । पछि उनले रिलायन्स इन्फोकाँम लिमिटेडको स्थापना गरे । अहिले उक्त कम्पनीलाई रिलायन्स कम्युनिकेन्सस लिमिटेडको नामबाट चिनिन्छ । मुकेश अम्बानी अहिले ५० अरब डलर सम्पत्तिका मालिक भइसकेका छन् । ५०० बाट सुरु गरेको उनको करियर अहिले उचाईमा पुगिसकेको छ । राताेपाटीबाट साभार